Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : nyantonony
Teny iditra Ny Antonony
Lahatsoratra Tsy hitako izay anton' ity! Mba ataovy amin' ny "antonony" lahy e! - Raharaha tsy misy toniany izany. Teny fandre matetika ireo, iray fototra, avy amin' ny hoe "anto" (tenatenany, fovoany). Ny hoe antonony dia fitambaran' ny "anto" sy ny "onony" (sahaza, mety), ka dia "ao amin' ny tena izy" no heviny; ary ny toniany dia angamba sisa avy amin' ny pasifan' ny verba efa tsy miasa intsony : manantony na manantonona, antoniany.